mendept_mm – MBC
ဇွန် 25, 2018
“ သင်္ဘောသားများ မိတ်သဟာယအစီအစဉ်”
၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃)ရက် စနေနေ့ နံနက်(၉း၀၀)နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်၊ အမျိုးသားဌာနမှ ဦးဆောင်၍ “ သင်္ဘောသားများ မိတ်သဟာယအစီအစဉ်” ကို အသင်းချုပ် ကူရှင်ခန်းမတွင် ပြုှုလုပ်ရာ အစီအစဉ်ကို နံနက်စာဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွင် သဘာပတိအဖြစ် ဦးဆင်ဝါးနော်၊ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းကို ဌာနသဘာပတိ ဆရာဆလိုင်းရောဂျာ၊ ဒေသနာဝှေခြင်းနှင့် […]
ဇူလိုင် 2, 2018
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၊ အမျိုးသားဌာနမှ ကြီးမှူးလျက် ၂၀၁၈-ခုနှစ် ဇွန်လ(၃၀)ရက်မှ စက်တင်ဘာလ((၂၉)ရက်နေ့အထိ အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း နံနက် (၉း၀၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ(၁း၀၀)နာရီအထိ အသင်းချုပ် အောက်မေ့ဖွယ်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော မုတ်သုံသမ္မာကျမ်းစာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကို ဇွန်လ(၃၀)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ရာ သဘာပတိအဖြစ် ဌာနသဘာပတိ ဆရာဆလိုင်းရောဂျာ၊ အထူးဆုတောင်းခြင်းကို ဌာနတာဝန်ခံဟောင်း Rev. နိုင်မြသီ နှင့် […]
ဩဂုတ် 8, 2018
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ အမျိုးသားဌာနမှ ကြီးမှူးပြုလုပ်သော အမျိုးသားနှင့်စီးပွားရေးသင်တန်းကို မန္တလေးမြို့ လီဆူနှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၆-၉)ရက်အထိ နေ့စဉ်နံနက်(ရး၃၀)နာရီမှည(၈း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပပါသည်။ သင်တန်းမှူးအဖြစ် အသင်းချုပ်ဌာနတာဝန်ခံ ဆရာဘရန်ဆိုင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကို အသင်းချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Rev. Dr. ရောဘတ်ပွန်းနှင့် Rev. ပီတာ၊ သင်ခန်းစာသင်ကြားခြင်းကို Dr. Jenny Lao (ILO […]
စက်တင်ဘာ 12, 2018
အမျိုးသားနှင့် စီးပွားရေးသင်တန်း (ကျိုင်းတုံ)
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အမျိုးသားဌာနမှဦးဆောင်သော အမျိုးသားနှင့်စီးပွားရေးသင်တန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၅-၇)ရက် အထိ အရှေ့ရှမ်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊ ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အရှေ့ရှမ်း၊ လားဟူ၊ အာခါ၊ ဝနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်တို့မှ (၄၈)ဦး ပါဝင်တက်ရောက် ပါသည်။